Dapɛn Finimfin Nhyiamu No Ho Akwankyerɛ
KENKAN WƆ Abkhaz Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English (Borɔfo) Ewe (Awona) Fijian Finnish Fon Frafra French Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mfantse Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Serbia) Ronga Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yacouba Yoruba (Alata) Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Hɛn Asɛnka Nye Christianfo Asetsena Nhyiamu Ho Akwankyerɛ
No Mu Nsɛm
Nsɛm A Wɔdze Wie
Ber Do Dzi
Ɔmansin Do Hwɛfo Ne Nserahwɛ
Dapɛn A Wɔbɔkɔ Ɔmansin Anaa Ɔmantɔw Ehyiadzi
Dapɛn A Wɔbɛyɛ Nkaadzi No
Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Do Hwɛfo
Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Eguamutsenanyi
Mpanyimfo Ntamu Nkitahodzifo
1. Wɔbɛyɛ Hɛn Asɛnka Nye Christianfo Asetsena nhyiamu no dɛ mbrɛ akwankyerɛ a odzidzi do yi nye dza ɔwɔ Hɛn Asɛnka Nye Christianfo Asetsena​—Nhyiamu Dwumadzi Nwoma no mu no tse. Ɔsɛ dɛ wɔhyɛ adawurbɔfo nyina nkuran ma wɔdze hɔnho hyɛ esuafo dwumadzi no mu. Hɔn so a wɔnnyɛ adawurbɔfo naaso wɔnye asafo no bɔ dzendzenndzen no, sɛ wɔgye nkyerɛkyerɛ ahorow a ɔwɔ Bible no mu no to mu na sɛ wɔbɔ hɔn bra ma ɔnye Christianfo gyinapɛn ahorow hyia a, wobotum dze hɔnho ahyɛ mu bi.​—be-TW kr. 282.
2. Mbue-Enyim Nsɛm: Minitsi 3 anaa mma onndu dɛm. Dapɛn biara, ber a wɔatow ndwom a wɔdze bɛhyɛ nhyiamu no ase ewie na wɔabɔ mpaa no, Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no dze asɛmbisa a ɔwɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu​—Nsɛmbisa Ho Mbuae no mu nye nsɛm afofor bekenyan dza ɔbɔkɔ do wɔ nhyiamu no ase no ho enyigye.
3. Akoradze A Ofi Nyankopɔn N’asɛm Mu:
Ɔkasa: Minitsi 10. Wɔdze ɔkasa no n’asɛntsir nye nsɛntsitsir ebien anaa ebiasa a ɔkasa no gyina do ama wɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma no mu. Ɔsɛ dɛ wɔdze dɛm ɔkasa yi ma ɔpanyin anaa ɔsomfo a ɔfata. Sɛ dapɛn Bible akenkan no yɛ Bible nwoma fofor bi a, wobeyi video bi dze ebue ano. Ɔkasafo no botum atwe adwen esi video no mu nsɛm a ɔfa asɛntsir no ho no do. Naaso, ɔsɛ dɛ ɔhwɛ hu dɛ ɔbɛkã nsɛntsitsir a ɔwɔ dwumadzi nwoma no mu no nyina ho asɛm. Afei, woesiesie mfonyin nye Kyerɛwsɛm mu nsɛntsitsir ahorow bi aka nsɛm a ɔsɛ dɛ wosusu ho no ho. Ntsi ɔsɛ dɛ ɔkasafo no dze dzi dwuma wɔ ne kasa no mu dɛ mbrɛ ber bɛma kwan.
Pɛnsapɛnsa Bible Mu: Minitsi 8. Ɔfã yi yɛ nsɛmbisa na mbuae a mbue-enyim nsɛm anaa ewieisɛm biara nnka ho. Ɔsɛ dɛ ɔpanyin anaa ɔsomfo a ɔfata yɛ. Ɔkasafo no botum egyina asafo no ehiadze do dze ehu mber dodow a ɔsɛ dɛ nsɛmbisa ahorow anan no mu biara dzi. Naaso, ɔsɛ dɛ obisa etsiefo no nsɛmbisa no nyina. Afei so, obotum ahwɛ dɛ kyerɛwnsɛm a wɔatwe adwen esi do wɔ nsɛmbisa ebien a odzi kan no mu no, no ho hia dɛ ɔma wɔkenkan ne nyinara anaa. Ɔsɛ dɛ hɔn a wɔbɛma mbuae no dze enyibu 30 anaa dza onndu dɛm ma hɔn mbuae no.
Bible Akenkan: Minitsi 4 anaa mma onndu dɛm. Ɔsɛ dɛ onuabanyin na ɔyɛ dɛm esuafo dwumadzi yi. Ɔsɛ dɛ osuanyi no kenkan ɔfã a wɔdze ama no no, na ɔnnsɛ dɛ ɔdze mbue-enyim nsɛm anaa ewieisɛm biara ka ho. Adze tsitsir a eguamutsenanyi no dze n’adwen besi do nye dɛ, ɔbɔboa esuafo no ma wɔaakenkan adze yie, ma ntseasee aaba mu, wɔaatoatoa mu kama, woeesi nsɛntsitsir no do dua yie, woeegyinagyina dɛ mbrɛ ɔfata, na wɔaakenkan adze tse dɛ mbrɛ wɔkasa da biara no.
4. Tu Mpon Wɔ Asɛnka Edwuma No Mu: Minitsi 15 anaa mma onndu dɛm. Woesiesie nhyiamu fã yi mbrɛ ɔbɛyɛ a obiara benya ho kwan abobɔ nsɛm a ɔdze bɔkɔ asɛnka no do, na oeetu mpon wɔ n’asɛnka nye ne nkyerɛkyerɛ mu. Wɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma no ne krataafa 1 no, wɔakyerɛ mbrɛ yebotum abɔ nkɔmbɔ wɔ asɛnka mu. Ɔsɛ dɛ esuafo no dze nserahwɛ a odzi kan nye sankɔhwɛ dwumadzi ahorow no gyina dɛm nsɛm no do. Sɛ adawurbɔfo pɛ a, wobotum akã video anaa nwoma bi a ɔwɔ Edwindadze Etsitsir A Yɛdze Kyerɛkyerɛ no mu no ho asɛm. Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma no kyerɛ mber dodow a ɔsɛ dɛ esuafo dwumadzi biara dzi, na ɔtɔfabi so a, ɔdze akwankyerɛ afofor bɛma. Ɔnnsɛ dɛ ɔba no dɛ esuafo no pɛ dɛ wodzi ber a wɔdze ama hɔn no nyina ntsi, wɔdze nsɛm afofor bi bɛkeka ho ara kɛkɛ. Ɔyɛkyerɛ no bi wɔ hɔ a, sɛ wosiesie hɔnho yie papaapa a, minitsi kor anaa dza ɔbor dɛm mpo botum aka. Sɛ no ho behia a, wobotum ama mpanyimfo ayɛ esuafo dwumadzi no bi.
Mbrɛ Yebotum Abɔ Nkɔmbɔ Ho Video Ahorow: Adapɛn bi a obedzidzi do wɔ bosoom biara mu no, wobeyi video ahorow a ɔbɛkyerɛ mbrɛ yebotum abɔ nkɔmbɔ, na woeesusu ho. Dɛm video ahorow yi bɛyɛ nserahwɛ a odzi kan, sankɔhwɛ a odzi kan na sankɔhwɛ a otsĩa ebien ho video. Ɔsɛ dɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no na ɔyɛ dɛm ɔfã yi.
Nserahwɛ A Odzi Kan: Onuabanyin anaa onuabaa botum ayɛ dɛm esuafo dwumadzi yi. Ɔsɛ dɛ no boafo no yɛ obi a ɔnye no bɔbea yɛ kor anaa ɔyɛ no busuanyi. Wobotum atsena hɔ anaa woegyina hɔ. Ɔsɛ dɛ osuanyi no paw nkyia a ɔfata wɔ asaasesin no mu. Ɔsɛ dɛ wɔdze hɔn nkɔmbɔ no gyina mbrɛ yebotum abɔ nkɔmbɔ no do.
Sankɔhwɛ A Odzi Kan: Onuabanyin anaa onuabaa botum ayɛ dɛm esuafo dwumadzi yi. Ɔnnsɛ dɛ no boafo no yɛ obi a ɔson no bɔbea. (km-TW 5/97 kr. 2) Wobotum atsena hɔ anaa woegyina hɔ. Ɔsɛ dɛ osuanyi no yɛ ɔyɛkyerɛ no ma yehu asɛm a yebotum akã aber a obi akyerɛ asɛm no ho enyigye wɔ nserahwɛ a odzi kan no mu na yɛresan akɛsera no no. Ɔsɛ dɛ wɔdze hɔn nkɔmbɔ no gyina mbrɛ yebotum abɔ nkɔmbɔ a ɔwɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma no mu no do.
Sankɔhwɛ A Otsĩa Ebien: Onuabanyin anaa onuabaa botum ayɛ dɛm esuafo dwumadzi yi. Ɔnnsɛ dɛ no boafo no yɛ obi a ɔson no bɔbea. (km-TW 5/97 kr. 2) Wobotum atsena hɔ anaa woegyina hɔ. Ɔsɛ dɛ ɔyɛkyerɛ a osuanyi no bɛyɛ no kyerɛ asɛm a obi botum akã aber a ɔresan akɛyɛ sankɔhwɛ wɔ sankɔhwɛ a odzi kan no ekyir no. Ɔsɛ dɛ wɔdze hɔn nkɔmbɔ no gyina mbrɛ yebotum abɔ nkɔmbɔ no do.
Bible Adzesua: Onuabanyin anaa onuabaa botum ayɛ dɛm esuafo dwumadzi yi. Ɔnnsɛ dɛ no boafo no yɛ obi a ɔson no bɔbea. (km-TW 5/97 kr. 2) Wobotum atsena hɔ anaa woegyina hɔ. Ɔsɛ dɛ wɔyɛ dwumadzi yi ma ɔyɛ dɛ Bible adzesua ne fã bi a ɔrokɔ do dada. Mbue-enyim nsɛm anaa ewieisɛm biara ho nnhia, gyedɛ dza wɔrohwehwɛ dɛ odzi ho dwuma no fa mbue-enyim nsɛm anaa ewieisɛm ho. No ho nnhia dɛ wɔkenkan nkyekyɛmu a wɔdze ama no nyinara dzen dze, naaso sɛ wɔpɛ a wobotum ayɛ no dɛm. Ɔsɛ dɛ dwumadzi no da nkyerɛkyerɛ a otu mpon edzi.
Ɔkasa: Ɔsɛ dɛ onuabanyin na ɔyɛ dɛm esuafo dwumadzi yi na ɔsɛ dɛ ɔma no dɛ ɔkasa kyerɛ asafo no.
5. Christianfo Asetsena: Sɛ wɔtow ndwom wie a, minitsi 15 a odzi do wɔ dɛm ɔfã yi mu no, yɛdze bɛyɛ dwumadzi kor anaa ebien. Woesiesie ɔfã yi dɛ ɔmboa etsiefo no ma wonhu mbrɛ wɔdze Nyankopɔn n’Asɛm no bɔbɔ hɔn bra. Wobotum dze afã ahorow yi ama ɔpanyin anaa ɔsomfo a ɔfata, gyedɛ wɔdze no ho akwankyerɛ pɔtsee bi ama. Naaso sɛ ɔyɛ asafo mu ehiadze dze a, ɔno ɔsɛ dɛ ɔpanyin na ɔyɛ.
Asafo Bible Adzesua: Minitsi 30. Wɔdze ɔfã yi bɛma ɔpanyin a ɔfata. (Sɛ mpanyimfo a wɔwɔ hɔ no nndɔɔ sõ, na sɛ no ho behia a, wobotum ama asomfo a wɔfata ayɛ bi.) Ɔsɛ dɛ mpanyimfo kuw no paw hɔn a wɔfata dɛ wɔyɛ Asafo Bible Adzesua no. Ɔsɛ dɛ hɔn a wɔbɛpaw hɔn no yɛ hɔn a wobotum ahwɛ adzesua no do yiye na aama ntseasee a ɔwɔ mu no ada edzi na woeewie wɔ ber ano. Ɔsɛ dɛ wɔyɛ hɔn a wobotum atwe adwen esi kyerɛwnsɛm etsitsir no do na wɔaaboa obiara ma woeehu mfaso a ɔwɔ dza worususu ho no mu. Sɛ wɔhwɛ hɛn nwoma ahorow mu a, wobenya akwankyerɛ ahorow a ɔfa mbrɛ wosi yɛ Ɔweɔn-Aban Adzesua no ho, na sɛ wɔkenkan iyi a ɔbɔboa hɔn papaapa. Sɛ ɔbɛyɛ yie a, ɔsɛ dɛ wɔsesa hɔn a wɔbɔhwɛ do nye hɔn a wɔbɛkenkan no dapɛn biara. Sɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no dze akwankyerɛ ma dɛ wontwa adzesua no tsia a, ɔno dze nyia ɔrohwɛ do no na ɔbɛkyerɛ kwan a wɔbɛfa do ayɛ no dɛm. Obotum esi gyinae dɛ mma wɔnnkenkan nkyekyɛmu ahorow bi.
6. Nsɛm A Wɔdze Wie: Minitsi 3 anaa mma onndu dɛm. Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no dze asɛmbisa na mbuae a ɔwɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu​—Nsɛmbisa Ho Mbuae no mu no, nye nsɛm bi a nna no ho hia wɔ nhyiamu no ase no bɛyɛ mbobɔdo. Afei so, dza wobosusu ho wɔ dapɛn a odzi hɔ no, ɔsɛ dɛ ɔkã ho asɛm; obotum dze asɛmbisa bi a wɔbɛma ho mbuae wɔ dapɛn a odzi hɔ no edzi dwuma. Sɛ ber bɛma kwan a, obotum abobɔ hɔn a wɔwɔ esuafo dwumadzi wɔ dapɛn a odzi hɔ no hɔn edzin. Wɔ eguamutsenanyi no n’ewieisɛm mu no, ɔsɛ dɛ ɔdze nkaabɔ biara a no ho hia no to gua na ɔkenkan nkrataa biara a no ho hia no kyerɛ asafo no, gyedɛ wɔdze akwankyerɛ fofor bi ama. Ɔnnsɛ dɛ wɔdze ndzɛmba bi a asafo no yɛ no daa tse dɛ, asɛnka ho nhyehyɛɛ na nhyehyɛɛ a wɔdze besiesie asa no do no ho nkaabɔ ma wɔ bamba no do, mbom no, ɔsɛ dɛ wɔdze bɔ nkaabɔ-pon no do. Sɛ ber a wɔdze ama ewieisɛm no suar ma nkaabɔ anaa nkrataa a ɔsɛ dɛ wɔkenkan no a, ɔsɛ dɛ eguamutsenanyi no ma enuanom a wɔwɔ dwumadzi wɔ Christianfo Asetsena ɔfã no twa hɔn dwumadzi ahorow no tsia dɛ mbrɛ ɔsɛ. (Hwɛ nkyekyɛmu 5 na 9.) Wɔdze ndwom na mpaabɔ bowie nhyiamu no.
7. Ma W’enyi Nku Akenkan Na Nkyerɛkyerɛ Ho: Ofi January 7, 2019 dapɛn no rokɔ no, ɔsɛ dɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no gyina Nkyerɛkyerɛ nwomaba no do dze nkamfo na afotu ma. Sɛ ehwɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma no mu a, ibohu dɛ wɔdze adzesua nɔmba ahyɛ ahyɛnsew ( ) mu wɔ esuafo dwumadzi no ho; ɔsɛ dɛ osuanyi biara dzi n’adzesua nɔmba no ho dwuma. Dapɛn a odzi kan wɔ bosoom biara mu no, Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no nye etsiefo no bosusu adzesua a ɔwɔ Nkyerɛkyerɛ nwomaba no mu no kor ho. Woesiesie nwomaba no ne fã a wɔato dzin “Kyerɛw Wo Nkɔenyim No To Hɔ” no dɛ osuanyi no mfa ndzi dwuma. Ɔnnsɛ dɛ eguamutsenanyi no kyerɛw hɔ.
8. Afotu: Sɛ osuanyi biara wie no dwumadzi no a, Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no wɔ bɛyɛ minitsi kor bi dɛ obegyina Nkyerɛkyerɛ nwomaba no do dze nkamfo na afotu ama no. Sɛ eguamutsenanyi no roto nsa afrɛ osuanyi no ma ɔaabɛyɛ no dwumadzi no a, ɔrennkã adzesua nɔmba a oridzi ho dwuma no ho asɛm. Naaso, sɛ osuanyi no wie no dwumadzi no na eguamutsenanyi no dze nkamfo a ɔfata ma no wie a, obotum akã adzesua a nna osuanyi no ridzi ho dwuma no ho asɛm na ɔaakyerɛ siantsir a ɔbɔɔ dɛm adzesua no ho mbɔdzen, anaadɛ obefi ayamuyie mu akyerɛkyerɛ siantsir a ɔsɛ dɛ ɔbɔ dɛm adzesua no ho mbɔdzen pii no mu. Sɛ eguamutsenanyi no tse nkã dɛ biribi fofor wɔ ɔyɛkyerɛ no ho a obotum aboa osuanyi no anaa etsiefo no a, obotum akã ho asɛm. Aber a wɔapon nhyiamu no anaa ber fofor bi no, eguamutsenanyi no botum egyina Nkyerɛkyerɛ nwomaba no anaa Ministry School buukuu no do dze afotu a no ho hia ama osuanyi no wɔ kukua mu. Dɛm afotu yi botum afa adzesua nɔmba a wɔdze maa no no anaa adzesua nɔmba fofor bi ho.​—Sɛ epɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu do hwɛfo na ɔfotufo boafo no hɔn dwumadzi ho nsɛm pii a, hwɛ nkyekyɛmu 13 na 16.
9. Ber Do Dzi: Ɔnnsɛ dɛ ɔfã biara dzi bor ber a wɔdze ama no do, na dɛmara so na ɔnnsɛ dɛ nsɛm a Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no bɛkã no dzi bor ber a wɔdze ama no. Sɛ esuafo no reyɛ hɔn dwumadzi no na sɛ hɔn ber no so a, ɔsɛ dɛ wɔfa enyifir kwan do twa hɔn do. Hɔn a wɔbɛyɛ dwumadzi a aka no so, sɛ obi dzi bor ber a wɔdze ama no no a, ɔsɛ dɛ ɔfotufo boafo no dze ho afotu ma no wɔ kukua mu. Ɔsɛ dɛ nhyiamu no nyinara dzi dɔnhwer kor na minitsi 45, a ndwom na mpaabɔ ahorow so ka ho.
10. Ɔmansin Do Hwɛfo Ne Nserahwɛ: Sɛ ɔmansin do hwɛfo bɛsera asafo no a, ɔsɛ dɛ nhyiamu no kɔ do pɛpɛɛpɛr dɛ mbrɛ wɔayɛ ho nhyehyɛɛ wɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma no mu no, naaso dza odzidzi do yi na ɔbɛsesa: Wɔdze ɔsom ɔkasa a ɔmansin do hwɛfo no dze minitsi 30 bɛma no bɛhyɛ Asafo Bible Adzesua a wɔbɛyɛ wɔ Christianfo Asetsena ɔfã no ananmu. Ansaana wɔbɛma ɔsom ɔkasa no, Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu eguamutsenanyi no bɔbobɔ nhyiamu no ne fã a woewie no do, ɔbɛkã dza wobosusu ho wɔ dapɛn a odzi hɔ no, ɔdze nkaabɔ biara a no hia no bɛma, ɔbɛkenkan nkrataa biara a no ho hia, na afei ɔaato nsa afrɛ ɔmansin do hwɛfo no. Sɛ ɔmansin do hwɛfo no ma ne kasa no wie a, ɔbɛma wɔatow ndwom a ɔnoara apaw ma wɔdze aapon nhyiamu no. Sɛ ɔmansin do hwɛfo bɛsera asafo no a, ɔnnsɛ dɛ wɔyɛ esuafo dwumadzi wɔ asa kakraba no do wɔ kasa a asafo no dze yɛ nhyiamu no mu. Sɛ asafo a ɔmansin do hwɛfo abɛsera hɔn no hwɛ kuw bi a wɔkã kasa fofor do a, kuw no botum ayɛ hɔn nhyiamu no. Naaso, sɛ ɔmansin do hwɛfo no rebɛma ɔsom ɔkasa no a, ɔno ɔsɛ dɛ dɛm kuw no bɛka asafo a ɔhwɛ hɔn do no ho.
11. Dapɛn A Wɔbɔkɔ Ɔmansin Anaa Ɔmantɔw Ehyiadzi: Sɛ asafo no bɔkɔ ɔmansin anaa ɔmantɔw ehyiadzi bi a, wɔrennyɛ asafo nhyiamu biara wɔ dɛm dapɛn no mu. Ɔsɛ dɛ wɔdze dza wobosusu ho wɔ dɛm dapɛn nhyiamu no ase no yɛ ebusua som anaa ankorankor adzesua.
12. Dapɛn A Wɔbɛyɛ Nkaadzi No: Sɛ Nkaadzi da no si wɔ dapɛn finimfin a, wɔrennyɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu ho nhyehyɛɛ biara. Naaso, ɔnnsɛ dɛ wotwa asɛnka nhyehyɛɛ mu wɔ Nkaadzi da no.
13. Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Do Hwɛfo: Mpanyimfo kuw no bɛpaw ɔpanyin kor ma ɔaasom dɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu do hwɛfo. Ɔsɛ dɛ ɔhwɛ hu dɛ nhyiamu yi ho ntotoe nyinara deda n’akwan mu na wɔayɛ no dɛ mbrɛ akwankyerɛ ahorow yi tse. Ɔsɛ dɛ ɔtaa nye ɔfotufo boafo no dzi nkitaho. Sɛ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Dwumadzi Nwoma ma bosoom bi nya ba a, Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu do hwɛfo no bɛhyehyɛ esuafo dwumadzi a ɔwɔ dɛm bosoom no mu no. (Hwɛ nkyekyɛmu 4.) Ɔsɛ dɛ osuanyi biara nsa ka no dwumadzi no annyɛ hwee koraa no adapɛn ebiasa ansaana da a ɔdze bɛyɛ dwumadzi no edu do. Ɔsɛ dɛ ɔhyehyɛ dwumadzi no wɔ Hɛn Asɛnka Nye Christianfo Asetsena Nhyiamu Dwumadzi (S-89) fɔɔm no do.
14. Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu Eguamutsenanyi: Dapɛn biara, ɔpanyin kor bɔsom dɛ eguamutsenanyi wɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu no ase. (Sɛ mpanyimfo a wɔwɔ hɔ no nndɔɔ sõ, na sɛ no ho behia a, wobotum ama asomfo a wɔfata ayɛ bi.) Ɔno na obesiesie mbue-enyim nsɛm nye nsɛm a wɔdze wie no, afei ɔno na ɔnye etsiefo no bosusu mbrɛ yebotum abɔ nkɔmbɔ ho video ahorow no nye video ahorow a wɔdze bobue adzesua fofor ano wɔ Nkyerɛkyerɛ nwomaba no mu no ho. Ɔno so na ɔbɔto nsa afrɛ obiara a ɔwɔ dwumadzi wɔ nhyiamu no ase no. Sɛ mpanyimfo no nndɔɔ sõ a, obotum ayɛ dwumadzi ahorow no bi wɔ nhyiamu no ase. Sɛ ɔroto nsa afrɛ obi ma ɔaabɛyɛ no dwumadzi anaa wɔyɛ dwumadzi bi wie na ɔrekã ho asɛm a, ɔnnsɛ dɛ ɔkasa pii. Mpanyimfo kuw no na ɔsɛ dɛ wɔpaw mpanyimfo a wɔfata ma dɛm dwumadzi yi. Wɔbɛma mpanyimfo a wɔbɛfata no ayɛ eguamutsenafo ofi ber to ber. Wobotum ama Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu do hwɛfo no ayɛ eguamutsenanyi mpɛn pii akyɛn mpanyimfo nkaa a wɔfata no, naaso asafo no ne nsɛm tsebea ahorow na ɔbɛkyerɛ. Sɛ ɔpanyin bi fata dɛ ɔyɛ Asafo Bible Adzesua a, nna ɔno obotum afata dɛ ɔyɛ nhyiamu eguamutsenanyi so. Naaso yɛserɛ, mma hom werɛ mmfir dɛ, ɔpanyin a ɔbɛyɛ eguamutsenanyi no, ɔyɛ ahwehwɛdze dɛ ɔdze nkamfo nye afotu a ɔdɔ wɔ mu ma hɔn a wɔbɛyɛ esuafo dwumadzi no, na ɔsɛ dɛ afotu na nkamfo no so boa esuafo no. Ɔsɛ dɛ eguamutsenanyi no hwɛ hu dɛ wɔbɔpon nhyiamu no wɔ ber ano. (Hwɛ nkyekyɛmu 6 na 9.) Sɛ kwan wɔ bamba no do na sɛ eguamutsenanyi no pɛ a, wobotum dze akasamu bi esi hɔ ama no, na aber a ogyina ho roto nsa afrɛ obi a ɔwɔ dwumadzi no, nna nyia ɔwɔ dwumadzi no so ebegyina asɛnkadaka no ho. Dɛmara so na sɛ eguamutsenanyi no pɛ a, obotum atsena pon bi ho wɔ bamba no do ber a osuanyi a ɔreyɛ Bible akenkan no reyɛ no dwumadzi no, nye ber a wɔreyɛ (dwumadzi ahorow a ɔwɔ) Tu Mpon Wɔ Asɛnka Edwuma No Mu no. Iyi remma wɔnnsɛɛ ber.
15. Mpanyimfo Ntamu Nkitahodzifo: Sɛ woyi esuafo dwumadzi no si nkyɛn a, mpanyimfo ntamu nkitahodzifo no na ɔbɛhyehyɛ dwumadzi a aka wɔ nhyiamu no mu nyina. Afei so, hɔn a mpanyimfo kuw no apen hɔn do dɛ wɔnyɛ eguamutsenafo no so, mpanyimfo ntamu nkitahodzifo no na ɔbɛhyehyɛ nyia dapɛn biara ɔbɛyɛ nhyiamu eguamutsenanyi. Ɔsɛ dɛ mpanyimfo ntamu nkitahodzifo no hwɛ hu dɛ hɔn a wɔwɔ dwumadzi wɔ nhyiamu no ase no nyina edzin bɔ nkaabɔ-pon no do, na ɔnye Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu do hwɛfo no bɔbɔ mu ayɛ no dɛm.
16. Ɔfotufo Boafo: Aber biara a ɔbɛyɛ yie no, ɔbɛyɛ papa dɛ wɔbɛma ɔpanyin bi a no ho akokwaa wɔ ɔkasa mu edzi dɛm dwuma yi. Ɔfotufo boafo no n’edwuma nye dɛ, sɛ no ho behia a, wɔ kukua mu no, ɔdze afotu bɛma mpanyimfo na asomfo wɔ ɔkasa dwumadzi biara a wɔbɛyɛ no ho. Dɛm dwumadzi ahorow yi botum ayɛ ɔkasa ahorow a wɔma wɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu ase, bagua mu ɔkasa, Ɔweɔn-Aban Adzesua anaa Asafo Bible Adzesua n’akenkan na no do hwɛ. (Hwɛ nkyekyɛmu 9.) Sɛ mpanyimfo dodow bi a wɔawea wɔ ɔkasa na nkyerɛkyerɛ mu wɔ asafo no mu a, wobotum asesa mu afe biara na ɔpanyin fofor bi so a ɔfata aasom dɛ ɔfotufo boafo. Iyi nnkyerɛ dɛ sɛ ɔpanyin anaa ɔsomfo bi yɛ dwumadzi biara wie a, ɔsɛ dɛ ɔfotufo boafo no ma no afotu.
17. Asa Kakraba: Sɛ esuafo no dɔɔ sõ a, wobotum ayɛ nhyehyɛɛ ma wɔaayɛ esuafo dwumadzi no bi so wɔ asa afofor mu. Ɔsɛ dɛ asa kakraba biara nya ɔfotufo a ɔfata, na sɛ ɔbɛyɛ yie a, ɔsɛ dɛ wɔma ɔpanyin bi yɛ. Sɛ no ho behia a, wobotum ama ɔsomfo a ɔfata ayɛ. Ɔsɛ dɛ mpanyimfo kuw no paw nyia obotum edzi dɛm dwuma yi, afei so, ɔsɛ dɛ wosusu ho hwɛ dɛ no ho behia dɛ wɔma nyimpa kor noara yɛ aber nyina, anaadɛ ɔsɛ dɛ wɔsesa mu. Ɔsɛ dɛ ɔfotufo no dzi akwankyerɛ a wɔdze ama wɔ nkyekyɛmu 8 no do. Sɛ wɔbɛyɛ nhyiamu wɔ asa kakraba kor anaa dza ɔbor dɛm mu a, ɔno sɛ wowie Pɛnsapɛnsa Bible Mu ɔfã a ɔwɔ Akoradze A Ofi Nyankopɔn N’asɛm Mu no a, ɔsɛ dɛ wɔma esuafo no kɔ asa kakraba anaa nkakraba no mu. Sɛ wowie Tu Mpon Wɔ Asɛnka Edwuma No Mu ɔfã no wɔ nhyiamu no ase a, ɔsɛ dɛ wɔbɛka asafo no mufo nkaa no ho. Sɛ worususu video bi ho na sɛ ɔbɛyɛ yie a, ɔsɛ dɛ hɔn a wɔwɔ asa kakraba no mu no tsena hɔ ara na wɔhwɛ video no bi anaa wotsie nkɔmbɔtwetwe no bi. Sɛ ɔnntse dɛm so a, ɔsɛ dɛ ɔfotufo no dze efir kakraba bi tse dɛ fon, tablɛt anaa laptop yi video no kyerɛ hɔn na wosusu ho.
18. Video Ahorow: Wobesiesie video ahorow bi ma wɔaahwɛ wɔ nhyiamu yi ase. Wɔdze video a wɔdze bɛyɛ dapɛn finimfin nhyiamu no bɔto JW Library app no do, na wobotum enya no wɔ elɛktrɔnek mfir ahorow do. Sɛ woyi mbrɛ yebotum abɔ nkɔmbɔ ho video ahorow no wɔ Asɛnka Nye Asetsena Nhyiamu no ase wie a, ɔwɔ mu ara a, wobotum eyi wɔ asɛnka nhyiamu ase.
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan Hɛn Asɛnka Nye Christianfo Asetsena Nhyiamu Ho Akwankyerɛ